ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » 10 ကြောင် Boyfriend မှသာလွန်ထူးကဲဖြစ်ကြသည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်တွေ
အားဖြင့် Tegan ဂျုံးစ်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇူလိုင်. 01 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
သင်က furry ထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့အခါသင်အသက်တာ၌ကစင်မြင့်မှနေကြပါတယ်, သင်ကုမ္ပဏီထားရန်အဖော် purring? အရှက်မရကြဘူး; ဒါကြောင့်ဘက်ယမ်း. ကြောင်အတွေးတွေရှိတယ်, ငါအမှုများစွာရှိကြောင်းပြောယခုအချိန်အထိသွားလိမ့်မည်, သူတို့ရည်းစားထက်တောင်ပိုကောင်းင်. သေချာတာပေါ့, သူတို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းပစ္စယများကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ့် (ကျနော်တို့နေ့စွဲအားဖြင့်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုကျိန်းသေငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များမယ်), ဒါပေမယ့်ဘာကိုအင်တာနက်ဖွင်, ခေတ်သစ်နည်းပညာနှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်များအတွက်ဖြစ်သည်. သူတို့ဘာလုပ်နိုင်သင်ချစ်သောသူများကိုဖြစ်ပါသည်, ကုမ္ပဏီနှင့်ရယ်၏တစ်ဖွဲ့လုံးတွေအများကြီး. လူတွေကသူတို့လိုချင်တဲ့ပတ်လည်ကို 'အရူးကြောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်' 'အမည်းစက်ချပစ်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ချစ်သူအပေါ်တစ်ဦးကြောင်ကိုရွေးချယ်ဖို့ပြောပေးပါဟင်လေရီယေဘုယျ၏အကြောင်းရင်းအများအပြားရှိပါတယ်.
အားဖြင့်ဓာတ်ပုံ orphum သို့ cc
ငါသည်သင်တို့ကိုဒီမှာအိမ်သာအကြောင်းပြောနေတာကိုသိရ, အမျိုးသမီးတွေအတွက်. ကရည်မှန်းမှကြွလာသောအခါကြောင်ယေဘုယျအားဖြင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်တိကျမှုရှိပါတယ်.
2. သူတို့ကကောင်းပြီသတို့သားသူတို့ဘာသာ Keep
အားဖြင့်ဓာတ်ပုံ လုကာဂျုံးစ် သို့ cc
ကြောင်ကတကယ်တော့သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်ဂရုစိုက်နှင့်ကောင်းမွန်သောရှာဖွေနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်. သေချာတာပေါ့, ရှည်လျားသောဆံပင်ဝတ်ရည်အချို့ကိုနောက်ထပ် Brush လိုအပ်ပါတယ်, သို့သော်အနည်းဆုံးသူတို့ကပျော်မွေ့.
3. သူတို့က Low ကို Maintenance င်
အားဖြင့်ဓာတ်ပုံ oskay သို့ cc
ကြောင်ချင်တယ်ရှိသမျှသည်အိပ်ပျော်ဖြစ်ပါသည်, အစာ, pats နှင့် playtime. သင်သည်မကောင်းတဲ့စိတ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစရာမလိုပါလိမ့်မယ်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလျစ်လျူရှုသို့မဟုတ် tuning သို​​့ TurtleMan, duck မင်းဆက် သို့မဟုတ်သမျှအခြားကမကောင်းဘူးယောက်ျားတွေစောင့်ကြည့်ပျော်မွေ့နေပုံရသည်.
အားဖြင့်ဓာတ်ပုံ ပစ္စည်း သို့ cc
ဒါကြောင့်နာမကျန်းမှုမှကြွလာသောအခါကြောင်တစ်ဆဌမသဘောရှိသည်, မကြာခဏအထူးသဖြင့်နှစ်သိမ့်နှင့်သူတို့၏ပိုင်ရှင်ကဖျားနာသောအခါမေတ္တာရှင်များမှာ. သူတို့က Man တုပ်ကွေးစာချုပ်ချုပ်ပြီးမသင်ရှင်းလင်းတဲ့လူကိုစတီယာရင်ဖြင့်ဤ Juxtapose နှင့်ကြောင်အထက်ရွေးချယ်မှုများမှာအဘယ်ကြောင့်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်.
အားဖြင့်ဓာတ်ပုံ Alisha Vargas သို့ cc
သင့်ရဲ့ကြောင်မှုကြောင့်သင်ခြေချောင်းကိုပဌနာသောကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလှတဲ့ icicles မှစစ်ကြောစီရင်တော်မူခြင်းသို့မဟုတ်သင်ပယ်ကြဆွဲထုတ်မည်မဟုတ်. သူတို့ကချီ snuggle နှင့်သင့်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပျော်ရွှင်နှင့်သင့်ရေခဲမြစ်ကိုခြေပူနွေးင်.
အားဖြင့်ဓာတ်ပုံ admiller သို့ cc
7. Pats နှင့်သာလျှင် Pats
အားဖြင့်ဓာတ်ပုံ အဘိဓါန် Emilian ဖြစ်သူ Robert Vicol သို့ cc
သူတို့တစ်တွေအနှိပ်ခံမှ ပို. ဘာမှမမျှော်လင့်ပါဘူး. ငါသည်သင်တို့အားဖြင့်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုသိ, လူကြီးလူကောင်း.
အားဖြင့်ဓာတ်ပုံ အဲလက်စ် Goodey သို့ cc
မြေပဲထောပတ်ထဲက 1am သရေစာတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်း, ချောကလက်ချစ်ပ်များနှင့်တစ်ဦးဇွန်း? တစ်ဦးကကြောင်ကြောင်းနှင့်အတူဆင်းဖြစ်လိမ့်မည်. ဒီနေရာမှာအားကစားရုံအသင်းဝင် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်မရူပသို့မဟုတ် unsubtle အရိပ်အမြွက်.
9. ထိုစုပ်ခွက်၌မျှမရှိ Whiskers
အားဖြင့်ဓာတ်ပုံ ken ပရင့်ထုတ်ရန် သို့ cc
အင်း, က Pun ဖြစ်ပျက်ခဲ့. ရပါတယ်.
အားဖြင့်ဓာတ်ပုံ anja_johnson သို့ cc
အဲဒီ creepy အသံ, ငါနှင့်အတူလုံး​​ဝအဆင်ပြေင်. ဒါပေမဲ့သင်ကသင့်ရဲ့ feline furry အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမအံ့အားသင့်စရာ VD ပြဿနာတွေရှိတယ်သိရန်နှစ်သိမ့်ရဲ့ဝန်ခံဖို့ရှိသည်.